८० राजाको राजतिलक र दुई साम्राज्यको राजपाट झेलेकाे नोट्रे डाम क्षणभरमै खरानी ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(August 26, 2019)
८० राजाको राजतिलक र दुई साम्राज्यको राजपाट झेलेकाे नोट्रे डाम क्षणभरमै खरानी !
बैशाख ३, २०७६ मंगलबार १४:५७:४५ | एजेन्सी
विश्वभरका क्याथाेलिकहरुकाे आस्थाकाे केन्द्र नाेट्रे डाम साेमबार राति निमेषभरमै खरानी भयाे । नाेट्रे डाम ८ सय ५० वर्ष पुरानाे हाे । नाेट्रे डाम पेरिसको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रहँदै आएको छ । पछिल्लो आठ दशकदेखि पेरिसको पहिचान बन्दै आएको छ ।
प्रसिद्ध लेखक भिक्टर ह्यूगोले यसै चर्चको नाममा सन् १८३१ मा ‘हञ्चब्याक अफ् नाेट्रे डाम’ उपन्यास लेखेका थिए । जसलाई फ्रेन्च साहित्यको अति नै महत्वपूर्ण कृति मानिन्छ । यो भन्दा अगाडि अन्तिम पटक फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको बेला पनि यो चर्चमा क्षति पुगेको थियो ।
त्यतिबेला चर्च विरोधीहरुले त्यहाँ भएका सन्तहरुका मूर्तिलाई भत्काएका थिए । यो चर्चले फ्रान्सको बदलिएको इतिहास देखेको छ । ८० राजाहरुको राजतिलक, दुई साम्राज्यको राजपाट, पाँच गणतन्त्रको गठन र दुई विश्वयुद्धलाई झेलिसकेको छ ।
सन् ११६३ मा सुरु भएर यो चर्च निर्माण सम्पन्न गर्न १८० वर्ष लागेको थियो । हरेक वर्ष यहाँ २ हजारभन्दा बढी विभिन्न कार्यक्रमहरु आयाेजना गरिँदै आइएकाे छ ।यस्ताे ऐतिहासिक धराेहर आगाेले खरानी हुँदा पेरिसवासी मात्रै हाेइन, पूरा विश्व समुदाय नै स्तब्ध भएकाे छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नाेट्रे डाम आगलागी घटनालाई विश्वकै एउटा दु:खदायी घटना भएकाे बताएका छन् ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोँले चर्चमा आगो लागेपछि भावुक हुँदै भने, ‘पुरै देश जलिरहेको छ ।’ यो स्मारकलाई जलिरहेको देखेर कतिपयहरुका आँखा पनि रसाए चाहे ती आस्तिक हुन या नास्तिक ।
विश्वकै सबैभन्दा बढी घुमिने देश फ्रान्स हो । तर फ्रान्सको सबैभन्दा बढी घुमिने त्यहाँको स्मारक आइफेल टावर नभएर नाेट्रे डाम भएको बताइन्छ । फ्रान्समा रहेका ९९ प्रतिशत टाउनहरुको जनसंख्या एकदिनमा नाेट्रे डाम घुम्न जाने मानिसहरुको सङ्ख्या भन्दा कम भएको बताइन्छ ।
वर्षमा एक करोड तीस लाख पर्यटकले नोट्रे डामको प्रमुख द्वार पार गर्ने गर्छन् । यसअनुसार एकदिनमा नाेट्रे डामले झण्डै ३५ हजारभन्दा बढी पर्यटकलाई स्वागत गर्छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपतिले नागरिकबाट चन्दा संकलन गरेर यो स्मारकलाई पुनर्निर्माण गर्ने भनेका थिए । तर फ्रान्सका एकजना अर्बपति फ्राँस्वा हेनरी पिनल्टले सोमबार राति स्मारकमा आगो लागेको घण्टाभित्रै आफू र आफ्नो परिवारले एक सय मिलियन युरो सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘यो फ्रान्सको सम्पत्ति हो । हाम्रो इतिहास बोकेको यस स्मारकलाई निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्वय हो ।’
अन्तिम अपडेट: असार १७, २०७६
जापानले सीपयुक्त र उच्च सीपयुक्त नेपाली कामदार लाने, उच्च सीपयुक्त कामदारले परिवार पनि जापान लान पाउने
चैत ११, २०७५ सोमबार
काठमाण्डौबाट बेपत्ता भएकी किशोरीको झोला पोखरामा भेटियो
प्रचण्डकाे अध्यक्षतामा नेकपाकाे सचिवालय बैठक : विभिन्न जिम्मेवा...
सरकारविरुद्ध असहयोग आन्दोलनको घोषणा, लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा ...
कमल थापाकाे प्रश्न : सरकारप्रति वितृष्णा जागेको बेला किन यस्तो...
कञ्चनपुरमा एक वर्षमा ३४ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता
पहिलो पटक भिडियाे कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक, सिंगापुरब...
नेकपाको केन्द्रीय समिति विस्तार, पार्टीका असन्तुष्टि जथाभावी पो...
प्रचण्डको अध्यक्षतामा सुरु भयो नेकपाको सचिवालय बैठक
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : लामिछानेसहित तीनै जनाको बयान सकि...
हङकङ : प्रहरी अधिकारीमाथि लट्ठी र फलामको रडले आक्रमण, ३६ प्रद...
आफ्नो नाममा रहेको सिमकार्ड मात्रै चलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणकाे...
भिडियाे कन्फरेन्समार्फत यसरी बस्दै छ मन्त्रिपरिषद् बैठक
सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो
'पलेँटी शृङ्खला' काे आउँदाे संस्करणमा 'लेकाली-परिवार' गुञ्जने
सिंगापुर जान लागेका एनआरएनए अध्यक्ष भट्ट जहाजबाट ओरालिए
काम सकिनै लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न म्यानमारको चासो